Munguva pfupi tichava smartwatch neGnu / Linux nekuda kwechikwata cheJolla | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe nhare mbozha dzavepo kwenguva yakareba, chokwadi ndechekuti pane mashoma mashoma maGnu / Linux sarudzo kwavari. Parizvino, mafoni emafoni ndiwo ane mapurojekiti mazhinji emahara zviri pamutemo uye nguva dzose. Asi zvimwe zvishandiso sematafura kana mawatchwatches haasati aine sarudzo yakanaka yeGnu / Linux. Asi zvinoita sekunge izvi zvichachinja nekutenda kuchikwata cheJolla.
Jolla ikambani yakavakirwa paSailfish OS, yayo inoshanda system iyo panguva imwechete iyo yakavakirwa paGnu / Linux. Kusvika padanho rekuti iyi sisitimu inoshanda inokwanisa kuita mapakeji uye zvirongwa zvatinazvo mukuparadzira kwedu Gnu / Linux.
Munguva pfupi yapfuura timu ye Jolla akwanisa kuendesa mashandiro ayo kune smartwatch. ari sailfish OS chiteshi Inoshanda zvakakwana pachigadzirwa kunyangwe isiri vhezheni yakagadzirirwa iyo. Izvi hazvireve kuti Jolla ari kuvhura yake smartwatch, asi izvo ichagadzira rom kuti ikwanise kuiisa pane smartwatches pamusika
Jolla's Sailfish OS yakatove yakaendeswa kune smartwatch kunyangwe isina kugadzikana parizvino
Iyo yekutakurika chirongwa chakazvarwa se rubatsiro kune timu yeAsteroid OS, anoshanda masisitimu ewatchwatches anoshandisa hwaro hwakafanana naJolla, nekubatsira zvaibvira kuisa raibhurari dzakadai uye mabhesheni kuitira kuti zvese Asteroid OS neSailfish OS dzishande pane izvi nhare mbozha.
Asi pane zvimwe zvinhu mune ino Sailfish OS chiteshi izvo zvisingashande zvakanaka muchirongwa ichi senge kuiswa kwezvimwe zvirongwa uye mabasa, chinhu chavari kushanda parizvino kuvhura rom yakachinjika kune smartwatches.
Chero zvazvingaitika zvinoita kunge zvishoma nezvishoma izvi zvishandiso zviri kuve zvakajairika uye zvakare zvine yavo sarudzo yemaharaKunyangwe parizvino tisina chero smartwatch inomhanya neDebian kana Fedora. Zvingave zvinonakidza Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Munguva pfupi tichava newatchwatch neGnu / Linux nekuda kwechikwata cheJolla